धनुषा सहित देशभरका पत्रकारलाई चुनावकाे लागि निर्वाचन समिती गठन - हाम्रो जनकपुर
धनुषा सहित देशभरका पत्रकारलाई चुनावकाे लागि निर्वाचन समिती गठन
२०७७ फाल्गुन १५, शनिबार १७:३२
जनकपुरधाम । नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखाले आसन्न निर्वाचनकालागि निर्वाचन समिती गठन गरेको छ ।
महासंघको केन्द्रिय सर्कुलर तथा गत फागुन १३ गतेको परिपत्र अनुसार शनिवार विहान बसेको पत्रकार महासंघ धनुषा शाखाको कार्यसमितीको बैठकले वरिष्ठ पत्रकार बिएम खनालको संयोजकत्वमा तिन सदस्सीय समिति गठन गरेको छ ।
समितिको सदस्यहरुमा वरिष्ठ पत्रकार तोरण कुमार कार्की तथा अधिवक्ता राजकुमार महासेठ रहेका छन् । महासेठ महासंघ धनुषा शाखाको कानुनी सल्लाहकार हुन् ।
चैतको पहिलो साता महासंघको तिनै तहको निर्वाचन जिल्ला जिल्लाबाटै हुन गइरहेको छ ।
देश संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गइसकेपछि पत्रकारहरुको छाता संगठन महासंघ पहिलो पटक तिनै तहको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट गर्न लागेको हो । चुनावको मिति नतोकिए पनि अबको एक महिनामा चुनाव हुने निश्चितप्रायः छ
विधानतः केन्द्रीय साधारणसभा भएको एक महिनाभित्र चुनाव हुनुपर्ने भए पनि आन्तरिक किचलोका कारण निर्वाचन तालिका सार्वजनिक भएको छैन ।
फागुन ५ गते साधारणसभा सकिएपछि चैत ५ भित्रमा चुनाव हुनुपर्ने हो । केन्द्रमा निर्वाचन गराउन पत्रकार कपिल काफ्लेको संयोजकत्वमा निर्वाचन समिति पनि बनेको छ । तर, पछिल्लो समय मनलाग्दी सदस्यता वितरण गरेको उजुरी परेपछि समितिले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।
यद्यपि, विवाद समाधान भएर चैतको आधाआधीतिर निर्वाचन हुने पत्रकार महासंघका नेताहरू बताउँछन् । पत्रकार महासंघको चुनावको मुखैमा वामपन्थी पत्रकारहरूको संगठन फुटेकाले त्यस खेमाका उम्मेदवारका आकांक्षीहरू खुलेर आउन सकेका छैनन् ।
निर्वाचन नजिकिएसँगै पत्रकारहरूले पदाधिकारी र सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा गर्ने होड भने चलेको छ । पत्रकार महासंघमा राजनीतिक पार्टीले टिकट दिएका व्यक्तिले मात्र जित्ने परम्परा बसिसकेको छ ।
यसपटक पनि टिकटको खटनपटन कांग्रेस र विभाजित नेकपाका दुई समूहका प्रचार विभागबाटै हुने निश्चित छ ।
जसरी प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि नयाँ सरकार गठन गर्ने सन्दर्भमा नेकपाका दुवै पक्ष विभाजित भएको बेला कांग्रेस दुवैको तानातानमा परेको छ, त्यसैगरी पत्रकार महासंघको चुनावमा पनि कांग्रेस सम्बद्ध प्रेस युनियनसँग दुवै पक्षले तालमेलको प्रयास गरिरहेका छन् ।
पार्टीनिकट पत्रकार संगठनहरूलाई आकांक्षी धेरै भएकाले आधिकारिक उम्मेदवार घोषणा गर्न कठिन भइरहेको छ । वामपन्थी पत्रकारहरू मिलेर लड्नुपर्ने आवाज उठे पनि नेकपाका दुई गुटको नेता जस्तै प्रेस संगठनका नेताहरूबीच पनि तिक्तता बढेकाले चुनावमा मिलेर जाने सम्भावना देखिएको छैन ।
आकांक्षीहरूले टिकटका लागि आफूनिकट नेता र संगठनमा लबिङ गरिरहेका छन् । यससँगै पत्रकार महासंघमा अध्यक्षलगायत पदाधिकारीमा को–को चुनाव लड्छन् भन्ने चासो बढ्दो छ ।
चुनावमा कस्तो समीकरण बन्छ ? र, को शक्तिशाली दाबेदार हो ? भन्न अहिले कठिन छ । नेकपाभित्रको विवादले पत्रकारको संगठनमा पनि असर गरेको छ । नेकपा विवाद किनारा नलाग्दासम्म पत्रकार महासंघभित्रको गठबन्धन पनि यताउता हुनसक्नेछ ।
नेपाली कांग्रेसनिकट प्रेस युनियन, केपी ओली पक्षीय प्रेस संगठन र प्रचण्ड–माधव पक्षीय प्रेस संगठनको बेग्लाबेग्लै रणनीति छन् । तर, उनीहरू एक्लाएक्लै चुनाव लड्ने वा कुन समूहसित मिलेर जाने भन्नेमा टुंगोमा पुगेका छैनन् ।